Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ciidamada Itoobiya & Xoogaga TPLF – Radio Daljir
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ciidamada Itoobiya & Xoogaga TPLF
Oktoobar 12, 2021 10:24 b 0
Ciidamada dowladda Itoobiya iyo ciidamo kale oo huwan ah ayaa wada maalintii labaad weeraro dhulka ah oo qayb ka ah guluf milatari oo cusub kaas oo ka dhan ah xoggaga TPLF, sida ay sheegeen saraakiil sar sare oo ka tirsan TPLF.
Getachew Reda, ayaa sheegay in dhibaatooyin ba’an ay gaysteen dagaallada soo cusboonaadayisla markaana xoggaga TPLF, ay joogaan dhulkii ay horey u qabsadeen iyo aagag kale oo badan.
Fallaagada ayaa gacanta ku haysa gobalka Tigray waxaana ay u tallaabeen gobalka dariska la ah ee Amxaarada halkaa oo hadda dagaallo ka socdaan.
War ay horey u soo saareen TPLF, ayay dowladda ku eedayen in ay ku qaadday weeraro cirka ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Balse dowladdu kama aysan hadlin eedaymaha loo jeediyay hase yeshee Wasiirka Difaaca dalkaasi oo war soo saaray ayaa xooggaga TPLF, ku eedeyay in ay faafinayaan warar been ah oo ay doonayaan in ay hal mar wada sheegtaan inay yihiin dhibanayaan guushunu aaney dhinac marin.
Xulashada Daljir & Cabdinaasir Jekey, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)
Farmaajo: “Shacabka Soomaaliyeed waa in ay u midoobaan xoojinta Dowladnimada”